Horumarinta Waxqabadka Isbedelka Cimilada, muwaadiniinta iyo Siyaasad-dejiyeyaasha
Tobankii sano ee la soo dhaafay, Cimilada Cimilada: Hantida Xayawaanka ee Will Steger waxa uu awood u siinayey shakhsiyaadka iyo bulshadaba in ay xal u helaan isbedelka cimilada, iyo natiijooyinka heerka gobolka ayaa sheegaya. Maanta, Minnesota waxay dhalinaysaa in ka badan 20 boqolkiiba awooda ay ka hesho ilaha dib loo cusboonaysiin karo, oo hadda waxay ku sugan yihiin dhismaha ugu weyn ee qoraxda ee badhtamaha galbeed - dhowaan la dhameeyay Mashruuca North Star. Iyadoo loo marayo barnaamijka hogaaminta bulshada iyo barnaamijka hoggaaminta dhallinyarada, Cimilada Cimiladu waxay gacan ka gaysatay dhisidda rabitaan dadweyne oo loogu talogalay nadaamka tamarta nadiifka ah iyo cimilada, sida Xeerka Awood-soo-saarka Generation ee soo socda - oo loo soo gaabiyo 10 sannadka 2017 - iyo halbeegga tamarta qoraxda.
Markhaatiga 'Steger' markhaatiyadiisa ayaa dhiirigeliyay in ka badan 60,000 oo reer Minnesota ah si ay u qaadaan tallaabooyinka cimilada ee guryahooda, goobaha shaqada iyo beelaha. Waxa kale oo uu ku dhiirrigeliyay kuwa go'aanka ka qaaday Minnesota inay u gudbiyaan Congress-ka Mareykanka inay sameeyaan isbedelka cimilada mudnaanta.
Taageerayaasha barayaasha, dhalinyarada, iyo dadweynaha inay u shaqeeyaan wakiillada xalka cimilada ayaa had iyo jeer ahaa mid muhiim u ah shaqada Cimilada. Markhaatiga 'Steger' markhaatiyadiisa ayaa dhiirigeliyay in ka badan 60,000 oo reer Minnesota ah si ay u qaadaan tallaabooyinka cimilada ee guryahooda, goobaha shaqada iyo beelaha. Waxa kale oo uu ku dhiirrigeliyay kuwa go'aanka ka qaaday Minnesota inay u gudbiyaan Congress-ka Mareykanka inay sameeyaan isbedelka cimilada mudnaanta. Maanta, waxay sii wadaan inay la shaqeeyaan shakhsiyaad si ay ula wadaagaan sheekooyin cimilada, si ay u gaarsiiyaan xal macna leh, degaan ku saleysan oo beelahooda, iyo inay si wax ku ool ah ugu doodaan siyaasado waxtar leh heerarka degaanka iyo gobolka.
Sannadka 2014, Cimilada Cimilada waxay bilowday mashruuc ka-qaybqaadasho dadweyne oo la yiraahdo Cimilada Minnesota: Sheekooyinka Local, Solutions Community. Sheekooyinka ay ka soo ururiyeen Minnesotans oo da 'kasta lehba waa qalab dhiiri galin iyo qalab dhiiri gelin ah oo ka caawinaya inay dhisaan dhaqdhaqaaq adag oo cimilada ah.
Awoodda xalalka beesha ee ku salaysan isbedelka cimilada waa inaan la dhimin. Magaalooyinka leh siyaasadaha cimilada ee hir-gelinta ah waxay u adeegaan inay noqdaan mabaadiida sii jiritaanka adduunka. Minneapolis, tusaale ahaan, waxay hirgelisay yoolka boqolkiiba 80 boqolkiiba hoos u dhigista qiiqa 2050 ama wax ka hor, a Qorshe hawleedka cimilada si loogu hago howlaheeda. Shirka isu imaatinka cimilada ee gobolka Minnesota, duqa magaalada Rochester wuxuu soo saaray bayaan ah in la raaco yoolka 100% tamarta nadiifka ah marka la gaaro 2031.